Toliara : Tratran-dramatoa teo am-pandriana ny vadiny sy ny mpiasany
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → janvier → 21 → Toliara : Tratran-dramatoa teo am-pandriana ny vadiny sy ny mpiasany
Redaction Midi Madagasikara 21 janvier 2014 teo am-pandriana, Toliara, Tratran-dramatoa, vadiny sy ny mpiasany
Nahatsikaiky ny tranga niseho omaly maraina tany Toliara. Rehefa niditra tampoka avy tany an-tsena ramatoa dia tratrany niboridana nihanoka fitiavana sy niray nampitombo taranaka teo ambony fandriana ny vadiny sy ilay mpiasa an-tranony, samy tsy nisy naha hetsika ireto mpangala-pitiavana ireto. Ny fivazavazan-dramatoa mafy no nanaitra ny manodidina. Nitangorona ny olona tia raha, ka afa-baraka rangahy ary tsy nahitan-teny mihitsy.
« Efa tsy matiko lolo ny fihetsiky ny vadiko sy ity mpanampy ahy ity hatry ny ela. Tsy mba olon-kafa ve no ampirafesanao ahy, fa dia solafa ato an-trano », hoy ilay ramatoa. Raha zohina ny fandehan’ny tantara dia efa ela « rapatron » sy ity mpanampy vavy bikana tsara tarehy ity no niaraka. Asa angamba, ramatoa vadiny efa somary mitarazoky ny taona (soara) no tsy zakan-drangahy, ka nanaitra azy hifankatia tamin’ny solafany mbola mijaridina tsara sy mijoro sady « miboenatra » ny aoriany, ka nataony ho vady kely tao an-trano ho rafivavin-dramatoa.
Tsy hay izay niafaran’ity raharaha ity, fa nanomboka niparitaka ny olona manan-katao, fa ireo zara aza mahita filma hojerena no mbola nitangorona teo amin’ity tranga ity. Maro ihany, hoy ny tsy mahay manias, ny mpampiasa na ny zanany lahy mifankatia amin’ny mpanampiny. Tsy maka lavitra e !